Famakiana Semalta 8 Ny SEO Mobile SEO
SEO dia ampahany manan-danja amin'ny tranonkala fanatsarana. Mihamaro hatrany ny olonanikaroka tao amin'ny smartphone, dia nipoaka ihany koa ny tranonkala finday. Nanjary lohahevitra mafana ihany koa ny SEO amin'ny finday, saingy mampalahelo ny ankamaroan'nyNy fampahalalana azonao momba ny SEO finday dia diso.
Ross Barber, manam-pahaizana momba ny Semalt Digital Services, manala ireo hevi-dehibe 8 SEO.
Hevi-diso 1: Ny fijerin'ny olona amin'ny PC sy ny finday dia mitovy
Fahamarinana: Miala sasatra ny olona, ​​noho izany dia tsy manana ny fahamendrehana amin'ny famakiana tatitra maro,lahatsoratra bilaogy lava sy finday hita ao amin'ny fitaovana findainy - india online tv buy. Amin'ny ankapobeny dia mitady valiny haingana izy ireo. Mampiavaka azy matetika izanyinona no tadiavin'ny olona amin'ny fitaovana iray. Ny fomba tsara indrindra hanamarinana ny fijerin'ny olona amin'ny fitaovana finday dia ny fampiasana GoogleAdWords. Azonao atao ny mijery ny fomba fijerin'ny maso amin'ny finday azo ampiasaina amin'ny olona.
Ny andalan-tsoratra 2: Ny fikarakarana finday sy ny fikarohana PC dia mampiseho valiny mitovy ihany
Fahamarinana: Miezaka mafy ny milina fikarohana mba hahafahan'ireo olona hahita izanyMila azy ireo rehefa mila izany. Midika izany fa ireo tranonkala izay tsy mpikirakira finday dia tsy mametraka avo ny vokatra. Mety ho tsara kokoa ny tranokalanaoho an'ny PC, saingy mety hiteny ratsy ho an'ny fikarohana finday. Noho izany, ny valin'ny fikarohana PC sy ny fikarohana finday dia tena hafa tanteraka. Ny fianaran'i Googlemanamafy an'ity hevitra ity. Tao amin'ilay fanadihadiana, nahita ny grenady mpikaroka fa nisy 86% ny fahasamihafana tamin'ny fomba nanehoana ny valinyaraka ny dikan-teny samihafa.
Hevi-diso faha-3: Tsy ho ela intsony dia hitady ny findainy ny olonasatria hanomboka hikaroka amin'ny fitaovana entin'izy ireo
Fahamarinana: Na dia misy oram-be aza ny fitaovana azo ampiasaina, dia tsy dia marefo loatra izy ireoamin'ny fiezahany hanao fikarohana azo ekena. Ny vanim-potoana ho an'ny fitadiavana finday dia tena fiandohana ihany..Siri sy Google Goggles dia manananiezaka ny handroso ny revolisiona, nefa na dia i Siri irery aza no mihazona tsangambato tokotokony ho 3% eny an-tsena, mampiseho fa tsy noraisina tanteraka ny olonaNy fiheverana ny fanoloana ny fitaovana findainy dia mikaroka amin'ny fikarohana amin'ny fitaovana azo itokisana.
Hevi-diso 4: Ny SEO Mobile dia tsy zavatra iray mihitsy!
Fahamarinana: Olona maro no te-hieritreritra fa ny SEO finday dia teny iray fotsinypifidianana. Marina fa maro ny olona tsy mahatakatra izany, ary misy ny manam-pahaizana vitsivitsy. Maro ireo olonaEritrereto ny ratsy momba ny SEO finday, saingy tsy midika izany hoe hevitra tsy misy dikany izay tsy tokony hohadinoina tanteraka.
Hevi-diso 5: SEO dia SEO, ary mitovy avokoa
Fahamarinana: Tsy misy, na, aza. Tsy mitovy ny SEO. SEO eo an-toerana, tranonkala SEO, ary SEOIreo tranonkala izay tsara ho an'ny Desktop sy ny fampiasana laptop dia tsy mitovy. Arakaraky ny fahatsapanao izany ary manitsy izany ho an'ny tranokalanao, nyTsara kokoa ny fandaharana sy ny fifanakalozan-kevitra azonao.
Hevi-diso 6: Tsindrio fotsiny ny SEO amin'ny finday sy voila - Mobile SEO!
Fahamarinana: irinay fa tsotra ity saingy tsy izany. Tsy afaka manatsara ny SEO amin'ny tranokala ianaoAmboary izany amin'ny finday. Ny fomba fijerin'ny SEO finday dia tsy mitovy amin'ny fanatsarana ny tranokala. Satria misy betsaka kokoafanovaovan'ny fitaovana finday any, ny SEO finday dia tokony ho voafaritra kokoa sy mazava kokoa noho ny tranokala SEO. Hianatra momba ny SEO findaymitaky fotoana sy faharetana, saingy rehefa vita izany dia hitondra vokatra tsara ho anao izany.
Hevi-diso 7: Manangana tranokala azo itokisana ary manamboatra izany ho an'ny finday
Fahamarinana: Mety ho toy ny mahavariana ny fampiasana ny tranonkala ho azo ampiasaina amin'ny interface rehetrahevitra. Na izany aza, mila mieritreritra ihany koa ianao fa mety mbola tsy afaka mahita izay ilainy avy amin'ny tranokalanao ny olona. Raha ny marina, hatramin'ny 60% amin'nyTsy mahita ny zavatra ilainy amin'ny fikarohana finday ny olona. Mitranga izany satria ny môtôn'ny finday dia mazava sy ilainadia niorina ho toy ny singa miavaka ary tsy tafiditra ao anaty tetik'ady SEO. Ohatra, i BMW sy Amazon dia nandany an'arivony dolaramiasa mafy mba hahazoana antoka fa ny tranonkala dia ny fifandraisana amin'ny finday ary ny SEO finday marina dia nampiharina marina.
Hevi-diso 8: Sarotra ny mahazo rohy rehefa mampiasa SEO finday
Fahamarinana: Tsy misy zavatra afaka lavitra ny fahamarinana noho izany! Raha ny marina, toerana malazaManiry ny hahazo rohy avy amin'ireo tranonkala manana fomba fanao tsara SEO ireo tompony. Lazao àry ny hahazoana rohy amin'ny Google, Mashable, ary ny hafatoerana.
Manantena izahay fa nanampy anao handrobona ny sasany amin'ireo sehatra SEO amin'ny finday ary hamoaka hazavanamomba ny tena zava-misy.